Somaliland: Wasiir Jideeyay Dhaqan Laf-jab Ku Ah Ammaanka Iyo Dawladnimadda Somaliland Oo Suxufiyiinta Qafaalanaya - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Wasiir Jideeyay Dhaqan Laf-jab Ku Ah Ammaanka Iyo Dawladnimadda Somaliland Oo...
Ma Go’aan Xukuumadeed Baa Mise Waa Awood Qaran Oo Wasiir Waran-cadde Ku Gabood Falay?
Wasiirka Arrimaha Gudaha Somaliland, Cali Maxamed Waran-cadde, ayaa la soo baxay dhaqan halis ku ah ammaanka dalka oo haddii aan wax laga qaban sawir taban ka bixin kara nabad-gelyadda jamhuuriyadda Somaliland iyo madax-banaanida Saxaafadda labadaba.
Dhaqankan cusub ee Wasiir Waran-cadde soo kordhiyay ayaa ah in ilaaladiisu ay afduubaan saxaafadda ka dibna ay garaacaan inta ay guryo gaar ah la tagaan. Dhacdadii ugu dambaysay waxay askarta Wasiirka Daakhiligu ay sifo sharci darro ah u afduubteen weriye Cabdi fataax Ismaaciil Caarshe. Iyadoo 7-dii Bishii September 2014-kii ay ku kaceen ilaalada dhaqan noocan oo kale ah oo ay ku afduubeen weriye Cabdi Shakuur Muxumed Muuse.
Naqdiga Ururka SOLJA
Ururka Suxufiyiinta Jamhuuriyadda Somaliland ee SOLJA, ayaa si xoogan u cambaareeyey tacadiyo fool xun oo Wasiirka Arrimaha Gudaha Cali Maxamed Warancadde iyo ilaaladiisu u gaysteen weriye Cabdifataax Ismaaciil Caarshe maalintii Sabtidii toddobaadkan.
“Ururka Suxufiyiinta Jamhuuriyadda Somaliland ee SOLJA waxa uu si adag u cambaaraynayaa tallaabada ay Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha Somaliland Md. Cali Maxamed Warancadde iyo ilaaladiisa gaarka ah ku qafaasheen, isla markaana guri ugu xidheen, iyagoo dhaawacyo gaadhsiiyey weriye Cabdifataax Ismaaciil Caarshe oo ka mid ah suxufiyiinta Somaliland.
Ururka SOLJA waxa uu u arkaa in Wasiir Cali Maxamed Warancadde iyo ilaaladiisa gaarka ah caado ka dhigteen tacadiga, jidh-dilka iyo u caga-juglaynta suxufiyiinta Somaliland, iyadoo ay dhacdadan ugu dambaysay walaac ku abuurtay ururka iyo weriyayaashaba.
Ilaalada gaarka ah ee Wasiir Cali Warancadde waxay subaxnimadii maalinta Sabtida ka qafaasheen wariye Cabdifataax Ismaaciil Caarshe isagoo gurigiisa ka soo baxay oo dukaan wax ka iibsanaya, waxayna ku riteen gaadhi, iyagoo la tegay guri ku yaal meel qarsoon, waxaanay ugu geeyeen Wasiirka Daakhiliga, isagoo markiiba gacanta u qaaday xilligaas oo askartiisa mid ka mid ahna laba-dible u hayey suxufiga.”
Ururka SOLJA waxay sheegeen walaaca ay ka qabaan facaa’ilkan ugubka ah ee Wasiirka daakhiligu la soo baxay. “Wasiir Warancade iyo ilaaladiisa gaarka ah ee weriyaha guriga qarsoon ku garaacay waxay hayeen ilaa iyo galinkii dambe ee Sabtida, iyagoo markii ay dhaawacyo culus u gaysteen si qarsoodi ah u geeyey Saldhigga Dhexe ee Booliska magaalada Hargeysa, halkaas oo ay haddana qol madow ku xidheen, iyadoo aan la marin OB-ga.
Sida uu wariye Cabdifataax Ismaaciil Caarshe u xaqiijiyey SOLJA, muddadii saldhiga lagu hayey oo dhammayd saddex maalmood, waxa laga qariyey in eheladiisa iyo SOLJA ogaadaan xadhiga iyo jidh-dilka loo gaystay, iyadoo aan la siin wax cunto ah,”Ayuu Guddoomiyaha SOLJA Maxamuud Cabdi Jaamac (Xuuto) ku dooday.
Mr. Xuuto waxa uu falkan ku tilmaamay kii ugu xumaa ee sannadkan soo mara warbaahinta Somaliland, waxaanu yidhi Dhacdadan oo ah tii ugu xumayd ee sannadkan dhacda, waxay caddaynaysaa in Wasiirka Arrimaha Guduhu ku tallaabsaday ficil aan ka dhicin dal shuuci ah, iyadoo Jamhuuriyadda Somaliland tahay dal dimuquraadi ah oo waliba dastuurka qaranka iyo Xeerka Saxaafadda dammaanad qaadeen madaxbannaanida saxaafadda iyo xorriyatul-qawlka.”
Weriyihii u horeeyay Ee Wasiirku Afduubay
Sidoo kale, 7-dii bishii Septemer 2014, ayaa ilaalada Wasiir Waran-cadde waxay afduubeen Weriye Cabdishakuur Muxumed Muuse (Heer-sare) oo ka mid ah suxufiyiinta dalka oo ay ku haysteen maqaal lagu qoray shabakadda Oodweyne oo uu mar la shaqeyn jiray isla markaana aanu kama war haynin maqaalkan.
“Lix nin oo ciidan ah oo ka tirsan ilaaladda wasiirka daakhiliga Cali Waran-cadde, ayaa khasab igu afduubtay. Waxaanay i yidhaahdaan fuul gaadhiga, markay xoog igu saareen gaadhigii waxay igu yidhaahdeen mabaxuus ayaad tahay saacaddan laga bilaabo. Waxaana la I geeyay gurigii Wasiirka.”ayuu yidhi Cabdishakuur Heersare.
Illaa imika Wasiirka Arrimaha Guduhu kama uu hadlin eedahan laf-jabka ku ah nabad-gelyadda dalka iyo sumcadiisa labadaba. Sidoo kale waxa loo baahan yahay in la suuliyo dhaqankan foosha xun ee Wasiir waran-cadde jideeyay. Cawaaqibka ka dhasha weerarkan qorsheysan waxa uu tumaati iyo dhabar jab ku noqonayaa xukuumadda Madaxweyne Axmed Siilaanyo oo ay tahay inay tallaabo sharci ah laga qaado Wasiirkan sida ka baxsan sharciga ugu tagri falaya awoodihii qaran ee uu ummadda ugu adeegi lahaa.
Sidoo kale, saxaafadda Somaliland oo lagu tilmaamo kuwa ugu xoriyadda wanaagsan marka la eego dunida saddexaad, ayay arrintani cabsi weyn ku abuuraysaa. waxa kale oo ay tallaabadani noqon kartaa dhaqan caam ah oo xukuumad, mucaarid iyo Ganacsataduba ay ku hagardaameeyaan saxaafadda,